Hlola iBat, e-UK - World Tourism Portal
Hlola uBat, eNgilandi
Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eBath, eNgilandi.
Amawebhusayithi okuvakasha asemthethweni eBath, eNgilandi
Bukela ividiyo ekhuluma ngoBath, eNgilandi
Hlola i-Bath idolobha elikhulu kunawo wonke endaweni yesigodi Somerset, England, eyaziwa ngokugeza kwayo okwakhiwe ngamaRoma. Hlola iBath esigodini soMfula Avon, amamayela angu-97 (156 km) entshonalanga London namamayela we-11 (18 km) eningizimu-empumalanga yeBristol. Idolobha laba yindawo yamagugu omhlaba e1987.
Idolobha laba yisipele esinegama lesiLatini I-Aquae Sulis ("Amanzi aseSulis") c. I-60 AD ngenkathi amaRoma akha amabhavu kanye nethempeli esigodini soMfula Avon, yize iziphethu ezishisayo zazaziwa nangaphambilini.
I-Bath Abbey yasungulwa ngekhulu le-7th futhi yaba isikhungo sezenkolo; isakhiwo sakhiwa kabusha nge-12th ne-16th century. Ngekhulu le-17th, izimangalo zenziwa mayelana nokwakhiwa kwamanzi okuvela ezimpophomeni, futhi uBati waziwa njengedolobha elise-spa ngenkathi yaseGeorgia.
Amathiyetha, iminyuziyamu nezinye izindawo zamasiko nezemidlalo kusizile ukwenza kube yisizinda esikhulu sezokuvakasha.
Kuneminyuziyamu eminingana kufaka iMnyuziyamu weBat Architetimenti, iVictoria Art Gallery, iMnyuziyamu we-East Asia Art, iHerschel Museum of Astronomy neHolburne Museum. Leli dolobha linamanyuvesi amabili - i-University of Bath and Bath Spa University - iBath College inikela ngemfundo eqhubekayo.
UBath waba yingxenye yesifunda sase-Avon e1974, kanti, kulandela ukuqedwa kwe-Avon e1996, ubelokhu eyisikhungo esikhulu seBath naseNorth East Somerset.
IBath inesimo sezulu esishisayo esivame ukuba manzi futhi simnene kunalo lonke izwe. Izinga lokushisa lonyaka lilinganiselwa ku-10 ° C. Ukuhlukahluka kwezinga lokushisa kwesizini kuphansi kakhulu kunobuningi be-United Kingdom ngenxa yamazinga okushisa olwandle asondele. Izinyanga zasehlobo zikaJulayi no-Agasti zifudumele kakhulu, ezinama-maxima nsuku zonke acishe abe yi21 ° C. Ebusika, kusho ukuthi amazinga okushisa aphansi we-1 noma i-2 ° C ajwayelekile.
UBath wake waba nomkhakha obalulekile wokukhiqiza, ikakhulukazi ekhiqizeni umqhele, ekwakheni ifenisha, ukuphrinta, okutholakele kubhedu, ukhula, imisebenzi edayiwe kanye nokwenziwa kwePlastine, kanye nezimila eziningi.
Kulezi zinsuku, ukukhiqiza kuyancipha, kepha idolobha liqhakambisa isoftware enamandla, ukushicilela kanye nezimboni ezenzelwe izinsiza. Ukuheha leli dolobha kubavakashi nakho kuholele enanini elikhulu lemisebenzi ezimbonini ezihlobene nezokuvakasha. Imikhakha ebalulekile yezomnotho eBath ifaka phakathi imfundo nezempilo, ukuthengisa, ukuvakasha nezokungcebeleka (imisebenzi ye-14,000) kanye nezinsizakalo zebhizinisi nezobuchwepheshe.
Enye yezimboni ezinkulu zikaBath ukuvakasha, unyaka nonyaka kuba nezivakashi ezingaphezu kwesigidi nezivakashi ezingama-3.8 ezivakashi. Ukuhambela ikakhulukazi kule mikhakha yezokuvakasha namagugu kwezamasiko, kusizwa ukukhethwa kwedolobha e1987 njengeSiza samaGugu Omhlaba lapho kuqashelwa ngokubaluleka kwamazwe aphesheya. Zonke izigaba ezibalulekile zomlando England amelwe ngaphakathi kwedolobha, ukusuka eBaths Bath (okubandakanya ubukhona bawo obalulekile wamaCelt), e-Bath Abbey naseRoyal Crescent, aya kwi-Thermae Bath Spa yakamuva. Ubukhulu bomkhakha wabavakashi bubonakala ezindaweni cishe ze-300 - kufaka phakathi amahhotela angaphezu kwe-80, amabili anezilinganiso 'zezinkanyezi ezinhlanu', ngaphezulu kombhede we-180 nokuhamba kokuhamba - okuningi okukhona ezakhiweni zaseGeorgia, nezimbili amakamu atholakala emaphethelweni asentshonalanga yedolobha. Idolobha liphinde libe nezindawo zokudlela ezi-100 nenani elifanayo lama-pubs nemigoqo. Izinkampani eziningana zinikezela ngokuvakasha okuvulekile okuphezulu kwebhasi ukuzungeza idolobha, kanye nokuhambela ngezinyawo nangasemfuleni. Selokhu kwavulwa iThemma Bath Bath e-2006, leli dolobha lizame ukuphinda lithathe isikhundla salo somlando njengokuwukuphela kwedolobha noma idolobha lase-United Kingdom elinikeza izivakashi ithuba lokugeza ngamanzi entwasahlobo afudumele.
Kunezindawo eziningi zamaRoma zemivubukulo kuyo yonke indawo ephakathi nedolobha. Izindawo zokugeza uqobo zingamamitha we-6 ngaphansi kwezinga lomgwaqo wamanje wedolobha. Emithonjeni esishisayo, izisekelo zamaRoma, izisekelo zezinsika, kanye nezindawo zokugeza zingabonakala, kepha konke okwenziwe ngamatshe ngaphezulu kwezinga lokugeza kuvela ezikhathini zakamuva.
IBath Abbey kwakuyisonto laseNorman elakhelwe phezu kwezisekelo zokuqala. Izinsuku zokwakha zamanje kusukela ngekhulu le-16th futhi zibonisa isitayela sekwephuzile kwe-Perpendicular enezinkinobho ezindizayo nezikhonkwane ezinamakhonkwane ezihlobisa iphariji ebunjiwe futhi ebhoboziwe.
Lesi sakhiwo sikhanyiswe ngamawindi e-52.
Imigwaqo yaseGeorgia eseduzane nomfula ibibhekeke yakhiwe phezulu ngenhla kwasekuqaleni komhlaba ukuze kugwenywe izikhukhula, kanti nemigwaqo ethwala abagibeli isekelwa phezu kwezindlu ezibhekiswa phambili kwezindlu. Lokhu kungabonakala emiphongolweni enamasitezi amaningi ezungeze iLaura Place South yePulteney Bridge, kumakholamu angaphansi kweGrand Parade, nasezinkomeni zamalahle ezihlanganisiwe ekwakhiweni kweNorth Parade. Kwezinye izindawo zedolobha, njengeGeorge Street, kanye neLondon Road ngaseCleveland Bridge, abathuthukisi abangaphesheya komgwaqo abahambisani nale ndlela, bashiya imigwaqo ephakanyisiwe enamaphethelo emakamelo okuvulelwa umgwaqo ongaphansi.
UBati waba yisizinda sempilo yemfashini eNgilandi phakathi ne-18th century lapho kwakhiwa i-Old Orchard Street Theatre nokwakhiwa kwezakhiwo ezifana neLansdown Crescent, iRoyal Crescent, iSekethe nePulteney Bridge.
Amathiyetha amahlanu kaBath - i-Theatre Royal, i-Ustinov Studio, i-Egg, iRodo Theatre, kanye ne-Theatre Theatre - adonsela izinkampani nabaqondisi abaziwayo emazweni aphesheya. Idolobhana linamasiko omculo omude; IBath Abbey, ikhaya leKlais Organ nendawo yekhonsathi enkulu kunazo zonke edolobheni, izigaba mayelana namakhonsathi we-20 nokuphindwa kwezitho ze26 unyaka ngamunye.
Bheka uBat, ikhaya laseVictoria Art Gallery, iMnyuziyamu we-East Asia Art, kanye neHolburne Museum, imidwebo yobuciko ethengiswayo eminingi nezitolo zakudala, kanye neminye iminyuziyamu eminingi, phakathi kwabo iBat Post Museum, iMyuziyamu Yezemfashini, iJane Isikhungo sase-Austen, iMnyuziyamu yeHerschel ye-Astronomy kanye namaBheshu aseRoma.
Zizwe ukhululekile ukuhlola uBhati…